Lutein Cas 127-40-2 आपूर्तिकर्ता, Bolise बाट निर्माता
[वनस्पति स्रोत] मैरीगोल्ड फ्लावर
[क्यास नम्बर] -127 40--2१-।
[आणविक फार्मूला] C40H56O2
[आणविक वजन] 568.88 XNUMX..XNUMX२XNUMX।
[ उपस्थिति ] सुन्तला पहेंलो पाउडर
[विशिष्टता] Lutein 90% HPLC
1. खाद्य क्षेत्रमा लागू, यो एक प्रकारको प्राकृतिक रंगको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले सामानको लागि रंग थप्न सक्छ;
2. स्वास्थ्य उत्पादन क्षेत्रमा लागू गरिएको, लुटेनले आँखाको लागि पोषक तत्वहरू भर्न सक्छ, रेटिनालाई बचाउन सक्छ;
3. कस्मेटिक्स क्षेत्र मा लागू, यो सधैं मान्छे को उमेर वर्णक कम गर्न प्रयोग गरिन्छ।
Lutein को बारेमा
लुटेन पहेंलो देखि सुन्तला रंगको क्यारोटीनोइड हो जुन गाढा हरियो पातदार तरकारीहरू जस्तै गाँठो, पालक र कालो, पहेंलो मकै, अण्डाको पहेँलो भाग, स्क्वास र गाजरमा पाइन्छ। गाँउको फूलको निकासीबाट निस्कने बजारमा धेरै तातो छ। लुटेन तपाईको आँखाको रेटिनामा केन्द्रित हुन्छ, त्यसैले यसलाई दृष्टिको लागि लाभदायक मानिन्छ। ल्युटिन पनि एक एन्टिअक्सिडेन्ट हो जुन पूरकको रूपमा उपयोगी देखिन्छ। र ल्युटिनले म्याकुलर डिजेनेरेशनको प्रगतिलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
Lutein पाउडर व्यापक रूपमा खाद्य additives मा प्रयोग गरिन्छ, पनि एक औषधीय वर्णक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।